Alfawise T0 လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် (25km / h, 20km မှအကွာအဝေး) မှစျေးနှုန်း ...
အစလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်, ScooterAlfawise T0 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 20km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
Alfawise T0 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 20km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်မတ်လ 2020,54:14 pm တွင်
စျေးနှုန်းသမိုင်း T0 Shockproof ခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ
€ 413,09 - စက်တင်ဘာလ 2019, 29
€ 257,06 - စက်တင်ဘာလ 2019, 20
€ 342,75 - သြဂုတ်လ 2019, 14
€ 428,44 - ဇူလိုင်လ 2019, 23
€ 437,01 - ဇူလိုင်လ 2019, 10
€ 413,09 - ဇွန်လ 2019, 30
€ 462,72 - ဇွန်လ 2019, 11
မှ: 2019 ဇွန်လ 11
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 462,72 - ဇွန်လ 2019, 11
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 257,06 - စက်တင်ဘာလ 2019, 20
T0 Shockproof ခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ
Alfawise T0 Shockproof ခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ [အတွင်းပိုင်းကူပွန်]
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Alfawise T0 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 20km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
လျှပ်စစ်စကူတာ 1 x ကို 1, 1 x ကိုအားသွင်းကိရိယာ, အင်္ဂလိပ်လက်စွဲစာအုပ် x, 1 hex Tool ကို4ဝက်အူ x x
X ကိုက x 108.00 43.00 114.00 စင်တီမီတာ x ကို 42.52 16.93 44.88 လက်မ x ကို
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, ရုံးအလုပ်သမားများ, ဆယ်ကျော်သက်
နင်းမြေပြင်ရှင်းလင်းခြင်း (အဘယ်သူမျှမအလေးချိန် bearing) (စင်တီမီတာ)
X ကိုက x 115.00 55.00 20.00 စင်တီမီတာ x ကို 45.28 21.65 7.87 လက်မ x ကို
Alfawise T0 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 20km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး) ဗီဒီယိုများ
အဘို့အ 12 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Alfawise T0 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 20km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
Olivier - 2019 11 ဇွန်
ငါ5ကျော်မိုင်နေအိမ်ထဲကနေအလုပ်လုပ်ဖို့ & ဤအမှုကိုသာမန် mode မှာကျော် left အကြောင်းကို 20% လျှပ်စစ်ပါဝါနှင့်အတူရှိ & ကျောငါ့ကိုရနိုင်သည်။ အကြှနျုပျ၏အကောင်းဆုံး 16 တစ်နာရီမိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစိုက်ထားသောဘယ်တော့မှကြောင့်tačiau, လမ်းတစ်လျှောက်တွင်စုံတွဲတစ်တွဲလျောက်ပတ်သောတောင်ကုန်းရှိပါတယ်, 15 တစ်နာရီမိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကရပ်တကနေသွားရဖို့ကန်တစ်ခုမှာအားလုံးကြောင်းလျင်မြန်စွာ accelerat လိုအပ် & ကြောင့်ဖွင့်သည်။ ငါသာ 120 ပေါင်ပေါ့, ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့ဤအမှုကို, great.Feels ချောမွေ့ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစွာကိုင်တွယ်။ ဤအမှုကိုတကယ်ကောင်းစွာဖန်ဆင်း & လွန်းကောင်းသောကြည့်ရှုသည်။ စစ်ဆင်ရေးအလွန်တိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါတယ် & ကြောင့်ရိုးရှင်းစွာစီးဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အမ်းဒေါက်ဂလပ် - 2019 11 ဇွန်
စူပါကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း Scooter! 15 တစ်နာရီမိုင်အထိငါက NYC လမ်းများပေါ်၌စီး - အလွန်အစာရှောင်တတ်၏။ အဆိုပါရထားဘီးကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်အငယ်စားလာပြီးကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်ကြီးမားသောဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်မဆိုလို, ငါမြန်နှုန်းကျော်စီးမျှပြဿနာ bumps ရှိသည်။ ငါ (3 မိုင်တစ်ရက်စုစုပေါင်း) နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ရရန်ဤသုံးပါ။ ဘက်ထရီတာရှည်မပါပြဿနာကြာနှင့်သူကဘီးအပိုတစ်စုံနှင့်အတူကြွလာ။ ငါ့ကို PATH မှာသယ်ဆောင်ရန်အဘို့အဒါဟာနည်းနည်းခက်ခဲသည့်ကိစ္စရဲ့, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကရန်အသုံးပြုတဲ့တာပါ။ အဆိုပါ Scooter တော်တော်လေးအစာရှောင်ခြင်းလည်းကုန်းတက်စီးနိုင်ပါတယ်။
Ninebot ES1 လျှပ်စစ် Scooter (20km / ဇ, 25km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
Ninebot ES2 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 25km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
Smartmey T5 လျှပ်စစ် Scooter (10km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
ASUS Zenfone7Pro 5G စမတ်ဖုန်း 8GB RAM 256GB ROM Snapdragon 865Plus 64MP + 12MP + 8MP အနောက်ကင်မရာ 5000mAh NFC Android 10 လက်မ 6.67Hz ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗားရှင်း
ASUS Zenfone7Pro 5G စမတ်ဖုန်း 8GB RAM 256GB ROM Snapdragon 865Plus 64MP + 12MP + 8MP နောက်ကင်မရာ ...
Alfawise V8S စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက် Dual-ရှုံ့ချ
Alfawise V8S Robot Vacuum Cleaner Dual SLAM Informacija apie produktą Youtube, spausti čia. ...
CHUWI HeroBook Pro ၁၄.၁ လက်မ Laptop Intel Gemini Lake N14.1 Intel UHD Graphics 4000 600GB LPDDR8 RAM 4GB SSD Notebook
CHUWI HeroBook Pro 14.1 လက်မ Laptop Intel Gemini Lake N4000 Intel UHD Graphics 600 8GB LPDDR4 RAM ...
360 S6 စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက် 1800Pa စုပ်ယူခြင်း Mopping လှုပ်ခြင်း Mode APP Remote Control LDS Lidar SLAM Algorithm
360 S6 စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက် 1800Pa စုပ်ယူခြင်း Mopping လျှော်စနစ် Mode APP Remote Control LDS Lidar SLAM ...
Aqara WSDCGQ11LM အပူချိန်စိုအာရုံခံ (Xiaomi က Ecosysterm ကုန်ပစ္စည်း)
Aqara WSDCGQ11LM အပူချိန်စိုထိုင်းဆအာရုံခံကိရိယာ (Xiaomi Ecosysterm ကုန်ပစ္စည်း) ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ...